Ngaba u-Boris Johnson (okhokho base-Ottoman) unokuqalisa isiphithiphithi eYurophu esiya kuphakamisa uBukhosi base-Ottoman? : UMartin Vrijland
Ndacinga ukuba yayiyihlaya xa umfundi ethumela impendulo elandelayo: "UnguTurk." Ndamangaliswa kakhulu, isiqwenga seWikipedia salandela apho sibonisa ukuba ngokwenene uBoris Johnson unookhokho baseOttoman. Ayizizo zonke izinyanya zakwa-Ottoman; singathetha ngokucacileyo ngookhokho abanomsebenzi wezopolitiko. UJohnson uvela kwigazi elifanayo ne-Ottoman kwezopolitiko u-Ali Kemal. Ukufunyanwa okunomdla, kuba kuxhasa ukuqikelela kwam kobukumkani base-Ottoman obuza kuphinda bubonwe. Ndivumele ndicacisa oku ngokubhekele phaya.
Ubukhosi base-Ottoman babukhe bukhulu emhlabeni kwaye babubona ukubhujiswa kwabo kungaphantsi kwekhulu leminyaka eyadlulayo. Kule minyaka ndizama ukubonisa kwisiza ukuba ezopolitiko zonke zilungele ukwenza kwabo izinto kwaye bonke bakhonza i-ajenda ye-aristocracy globalism. Akumangalisi ke ngoko ukuba ngoku sibone isizalo sosapho lakwa-Ottoman abalupheleyo belungiselela isiphithiphithi eYurophu (nge Umcimbi weBrexit) apho uBukhosi base-Ottoman buya kuphinda buchache. Kudala ndicacisa ngokubuyiselwa koBukhosi baseOttoman kangangeminyaka emihlanu apha, kwaye ke, ngokokuthetha kwam, isihloko esingayekwanga kakhulu kwindawo ebizwa ngokuba yinyani.
Uluhlu nje oluncinci lwe Ikhasi le Wikipedia kwa-Ali Kemal:
Ali Kemal Bey (IOttoman yaseTurkey: عَلِي كمال‌ بك; I-1867-6 Novemba 1922) yayiyindlela OttomanIntatheli-yase-Turkey ezelwe, umhleli wephephandaba, imbongi kunye nesopolitiko sokutyikitywa kwenkululeko, owayekwangumphathiswa wezinyanga ezintathu engurhulumente kaDamat Ferid Pasha, onguMakhulu uVizier woBukhosi base-Ottoman. Wabulawa ngexesha leMfazwe yokuZimela yaseTurkey.
U-Kemal nguyise kaZeki Kuneralp, owayesakuba ngummeli wase-Turkey eSwitzerland, e-United Kingdom, nase Spain. Ukongeza, uyisemkhulu ngotata wabo bobabini oonozakuzaku baseTurkey uSelim Kuneralp, kunye nezopolitiko zaseBritane UStanley Johnson. Ngo-Stanley Johnson, u-Ali Kemal ngoyisemkhulu UNkulumbuso waseBrithani UBoris Johnson, ngokunjalo noJo Johnson (MP we-Orpington), intatheli uRachel Johnson, kunye nosomashishini uLeo Johnson.
Kule gama lesitayile seOttoman yaseTurkey, Ali Kemal ligama elinikiweyo, kwaye akukho gama losapho.
Ndisafuna ukugxininisa le ntetho yokugqibela. Siyazi ukuba i-aristocrats ayithandabuzi ukutshintsha amagama abo kunye nokuba eli qela le-elitist lifihle phakathi kwezopolitiko eziqhelekileyo (bona umzekelo eli nqaku). Yiyo loo nto i-United Kingdom ilawulwa ligazi laseburhulumenteni laseJamani (njenge-Netherlands). Indlu I-Saxony-Coburg ne-Gotha (I-Saxony-Coburg-Gotha) sisidalwa sobukhosi saseJamani esamalungu alo alawula amazwe awahlukeneyo aseYurophu. Isiduko sivela kwindlu ye-ducal yase-Saxony-Coburg-Saalfeld (kwindlu ka Wettin), ethe yafumana ubuchule obuphindwe kabini base-Saxony-Coburg nase Gotha e-1826. Kwinkulungwane ye-XNUM-X, inzala evela kolu luhlu yanikwa amanye amazwe ahlukeneyo. Kwi-19, uKumkani uGeorge V watshintsha igama losapho lwasebritane ukuba yiWindsor. Imithombo yeendaba ezisasazayo kunye nabaphathi babo bokubona baqinisekisa ukuba siyalibala ngokukhawuleza lonke olu lwazi, ukuze abantu bangaqondi ukuba idemokhrasi yinto ekude kwaye iiristocracy antiistocrates zisalawula. Bangabagcini beskripthi esikhulu.
Umcimbi we-Brexit yinxalenye yesikripti esikhulu; Isicatshulwa esivezwa phakathi kwezinye izinto kwiziprofetho zenkolo. Ngesibhengezo seBalfour kwi1917 kunye nokuqhekeka koBukhosi base-Ottoman, isiseko sasibekelwa ukusekwa kwelizwe lakwa-Israeli. Imfazwe yesibini yehlabathi yayifuneka ukufezekisa oku ngokuqinisekileyo, kunye ne-holocaust tata yetyala njengelayisensi yokumiselwa kwelizwe lakwa-Israyeli kwi1948. Ngokuqhekeka koBukhosi baseBritane emva koko nokubola kwazo zonke ezo koloni zakudala, ukutshintsha amandla e-US kuya kwenzeka kwaye zonke ezo zinto zakudala zangeniswa ngokufihlakeleyo phantsi kwendlu yasebukhosini yase-Bhritane, njenge-US njengelizwe eliphantsi kwesithsaba saseBritane. Obu bukumkani butsha baseMelika (obuhlawula irhafu kwisithsaba saseBritane) sele buza kuwa. Uqikelelo lwam sele kuyiminyaka yokuba ubukhosi base-Ottoman buchache. Oku kunento yokwenza neskripthi esiyintloko, apho kufanele ukuba kubekho umlo iJerusalem phakathi kweenkolo ezimbini eziphambili zehlabathi. Ngenxa yoku, iYerusalem kuqala kwafuneka ukuba ivele ezandleni zamaZiyoni kwaye ke imfazwe yehlabathi yokuqala neyesibini nayo yahamba ngokwebhalo. Imfazwe yehlabathi yesithathu yinto elandelayo kwi-ajenda.
Ukufezekisa le nto yesithathu ye-ajenda, isiphithiphithi siya kuqala ukudalwa eYurophu.
'I-Ordo ab Chao' sisiLatini 'soku-oda ngaphandle kwezidubedube', isixa esisetyenzisiweyo ukususela kwimemori yexesha elizayo ukuze sikwazi ukumisela amandla aphindaphindiweyo. Isipelingi esivela kwiFreemasonry, eyahlula-hlulwe ngokwamanqanaba. Elona nqanaba liphezulu phakathi koluntu oluyimfihlo yi-33. Sibona eli nani kakhulu kwimisitho okanye kwiziganeko ezibalulekileyo ezinomnwe kwipayi. Indima yemibutho eyimfihlo ihlala icekeceke okanye igxothwa njengenkolo yethamsanqa, kodwa ukuba sijonga nje izindlu zobukumkani, sibona ukubaluleka kubaluleke kangakanani kule 'miyalelo'. Ii-Orange's, umzekelo, zibalaseleyo kwi Ubuchule beMalta (uluntu, inxalenye yomthi wentsapho kwimibutho eyimfihlo).
Imibutho eyimfihlo yonke ifihlakele ngokufihlakeleyo okanye iBhabhiloni ngokwemvelo. Ke lonto ibuyela kurhulumente wokuqala ophambili wepiramidi ovela "kwimpucuko" yokuqala eyaziwayo. Kubonakala ngathi ngamandla kule mibutho iyimfihlo kukho (amasebe adibeneyo) e-legazi ezine-pharaonic egazi eligcina umnombo wazo wemizila ngemitshato ecwangcisiweyo.
"I-Ordo ab Chao" sisiqubgo seSchool Freemasonry yaseScotland. Igama lesiNgesi 'iScotish' lisuka kwelesiGrike elithi 'skotiā' (ubufazi bususelwa kwiskotios, mnyama, isithunzi, kwisithunzi esichazayo, kwimifanekiso emnyama, ebumnyameni). Unokuthi ukuba 'i-skotos' imela ubumnyama nesithunzi, leyo 'skotiā' imele ukukhanya. Ukuba kamva sifumanisa ukuba iFreemasonry nguLuciferian, ke loo nto ngokuqinisekileyo kukukhanya kweLuciferian. Emva kwayo yonke loo nto, uThixo wathi 'makubekho ukukhanya' kwaye ke isikrini sakhanyiswa kwaye kwavela umfanekiso. Oku kukhumbuza umdlalo wePlaystation otshintshiwe, ukuze umfanekiso ubonakale kwiscreen ngendlela yeephikseli ezikhanyayo (bona ngcamango yokufanisa).
Itempile yaseVenus Scotia yayimi kwiYiphutha yakudala. Kuyatshiwo ukuba ilizwe laseScotland lathatha igama lakhe ukumkanikazi we-pharaoh wase-Egypt ogama lingu Scota. Apho sibona enye ikhonkco kunye nolunye lwempucuko yakudala, ebizwa ngokuba yi-Egypt. Ingxoxo yokuba bobuphi obukumkani obabukhe bukhona, iBhabheli okanye iJiphutha, ayibonakali ngathi iphumelele ngokupheleleyo ukuba ugaya ubunzulu, kodwa inqaku kukuba imibutho eyimfihlo ibonakala inxibelelene noopara belo xesha. Ngayiphi na imeko, kucacile ukuba kubonakala ngathi kukho ukucwangciswa kwemitshato ngaphakathi kweli qela legazi. Ingxaki, nangona kunjalo, kukuba kule mihla yonke into icinyiwe etafileni njengeendaba ezingeyonyani okanye ithiyori yethamsanqa, okuthetha ukuba bambalwa abasayijongayo nzulu. Andizukuhluphi apha. Zifumanele ngokwakho ukufumana ukuba ingaba ama-elite atshatile kangakanani kangangeenkulungwane hayi ngenxa yeemvakalelo zothando, kodwa kwisiseko sokuqonda okucwangcisiweyo.
U-Albert Pike wayengumntu obalulekileyo waseScottish Rite Freemasonry. Wayeyena ophakamileyo oqeshwe kwaye waba ne-33e degree. Ngokomlando wegosa, uPike wayengumthetheli wemfazwe yaseMexico naseMerika, ugqwetha, umbongi kunye naloo mntu waseKuKluxKlan. UPike wakhula ngokukhawuleza waba yiSahluko esiPhezulu esiPhakathi kule ntshukumo. Wabuyisela kwakhona aze ahumushe imikhosi yamaMason aze avelise incwadi yefilosofi yokuqala ye-Morals and Dogma ye-Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, incwadi ebalulekileyo enhlanganweni. ISikhumbuzo sePike yiyona kuphela evezwe ngaphandle eWashington DC ngokuhlonipha iGqwetha leNgcaciso. Isikhumbuzo sisinye sezikhumbuzo ze-18 zeMfazwe yombutho eWashington, DC, ezibhalwe kunye kwi-1978 kwiRejista kaZwelonke yeNgingqi. Ngoko uPike kubonakala ukuba wayengumntu obalulekileyo oye wahlala kwindawo yokuzalwa kombuso waseMelika (ngoku ehla) esiyaziyo ngoku.
I-Freem times ayinakuze ichazwe njengendima ebalulekileyo kwimbali yaseburhulumenteni. Zisebenza njengoko zazinjalo ngasemva kwaye ziya kuhlala zidlala phantsi kokubaluleka kwazo (kumhlaba obonakalayo). Ungayithelekisa loo nto ukuya kumaxesha amanqam, apho izindlu zasebukhosini ziye zaboniswa ngamajelo eendaba njengeziko lemikhosi elinamandla alo athe avinjwa amandla ngoorhulumente wentando yesininzi (eyiphi na indawo ekude). Ke ukuba ukhangela i-Wikipedia yokufunda okusemthethweni kwamagama achazwe ngasentla, abanayo indima ebalulekileyo. Kuzo zonke iisimboli esizibonayo ezisijikelezileyo, nangona kunjalo, sizaliswe luphawu lwenkululeko (iMax Verstappen, hayi. I-33, umzekelo, kunye ne-chessboard kwifomula yefomula 1). I-Freem times iyabonisa ukuba bayalawula, kodwa abantu abahamba ngokubonakala abaziimfama.
Ku-1871, u-Albert Pike wabhalela umhlobo wakhe wase-Italiya u-Freemason uGeuseppe Mazzini. Kule leta wayichaza imfazwe yehlabathi ezintathu. Kuzo ezimbini ezibini ezibhalwe ngokupheleleyo. Funda ukuguqulelwa kwileta engezantsi:
Imfazwe yokuqala yehlabathi kufuneka ibhalwe ukuze i-Illuminati iphelise amandla e-Czars eRussia kwaye yenza ilizwe lingakholelwa kumaKomanisi. Ukwahlukana phakathi kolawulo lwaseBrithani neJamani luya kubanjiswa ngabaphathi be-Illuminati kwaye basebenzise ukwakha le mpi. Ekupheleni kwemfazwe, ubukhomanisi bwakhiwe kwaye busetyenziswa ukutshabalalisa oorhulumente kunye neenkolo
Imfazwe Yehlabathi Yesibili kufuneka ikhutshwe ngokusetyenziswa kwemibono phakathi kwama-fascists kunye neZioni zezopolitiko. Le nto kufuneka imiselwe ukutshabalalisa iNazism kunye nokuqinisekisa ukuba i-Zionism yezopolitiko yomelele ngokwaneleyo ukuseka ilizwe lika-Israyeli ePalestina. Ngexesha leMfazwe yeSizwe yeBili, ubuKomanisi bamazwe ngamazwe kufuneka bahlakulele ngokukhawuleza njengento engalinganiyo yobuKristu, de kube ixesha apho singasebenzisa le ntlukwano kwinkathazo yokugqibela yentlalontle.
IMfazwe Yehlabathi YesiThathu imele ikhutshwe (ngamagosa e-"Illuminatiâ € ") ngquzulwano phakathi kweZioni zezopolitiko kunye neenkokheli zehlabathi lamaSilamsi. Imfazwe imele iqhutywe ngendlela efana neyobuSulumane (ihlabathi lama-Arabhu yamaSulumane) kunye neSionism yezobupolitika (uRhulumente weSizwe kaSirayeli) ngokutshabalalana. Amazwe ajoyina le ngxabano aya kufakwa epheleleyo, ekuziphatheni, ngokomoya nakwezoqoqosho. Siya kukhulula i-nihilists kunye nabakholelwa kuThixo kwaye siya kubangela inhlekelele enkulu yentlalo. Siza kukhulula ukukholelwa kuThixo kunye ne-nihilism ehlabathini. Siza kubonisa ukukrakra kwayo. Ziyimbangela yobundlobongela phakathi kwabantu. Emva koko abantu baya kufuneka balwe nxamnye nomncinci, abaguquleli bakaThixo abangakholelwa kuThixo baya kupheliswa kwaye ababhubhisi belizwe baya kupheliswa. Uninzi lwabantu luya kudana ngobuKristu. Ingqondo yabo ayiyi kuqonda isikhokelo okanye ikhampasi. Baza kufuna ixesha elifanelekileyo. Baya kufuna ukugxila ekudumiseni kwabo into ethile. Ekugqibeleni ukukhanya kwangempela kukaLucifer kuza kuboniswa kubaphulaphuli. Ukubonakaliswa kukaLucifer kuya kulandela ukutshatyalaliswa kobuKrestu kunye nokungakholelwa kuThixo, okuya kubhubha kokubili.
Ihlala isithi le leta iyinyani, kuba igama elithi "ubuNazi" ngekhe laziwa kwi1871. Yintoni engakhathalelwanga kweso sizathu sokuqiqa kukuba abadali beskripthi banokuza namagama ngaphambi kokuba uluntu ngokubanzi luwazi la magama. Ke ukuba ubeka igama lophawu kwintengiso njengenkampani, iarhente yentengiso iyakube iyifumene kwakamsinya, kunokuba abantu ngokubanzi beyibone. Ewe, ukuba uPike wachaza (isiprofetho) isibhalo kwiqabane lakhe iMazzini, ke kungabakho igama kulo elalingaziwa eluntwini kude kudlule iminyaka kamva.
Kubonakala ngathi imfazwe yesithathu ihleliwe. Oku, ngokulandelelanayo, kuya kufana nesimo seziprofeto zeenkolo ezinkulu zehlabathi, ezibonakala zichasene ngokucacileyo (ubudemon), kodwa zifana ngokufanayo ngexesha lokugqibela-xesha (jonga apha). Ngokomzekelo, bobabini amaSulumane namaKristu balindele ukulwa noKristu (Dajjal in Islam) eza kuzibonisa njengomesiya. Kwakhona ulindele ukubuya kukaYesu (khangela umzekelo le ngcaciso evela kuSheikh Imran Hosein). AmaYuda alindele ukuba uMesiya kunye neYerusalem badlala indima ebalulekileyo kuzo zonke iicawa. Ukusekwa kwimeko ka-Israyeli kwadlala indima enkulu kwimfazwe yokuqala yehlabathi ezimbini, nangona oku kuye kwaphazamiseka kakhulu kwiingxelo zembali. Kwimfazwe yokuqala yehlabathi, umhlaba wawugcinwe kwilizwe lakwaSirayeli Balfour isitatimende. Ku Isivumelwano seHaavara ukususela kwi-1933 ukufudukela kwamaYuda ukuya ePalestina kwase kubhaliswe neJamani. Umbuso wakwaSirayeli wasungulwa emva nje kweMfazwe Yehlabathi yesiBini. IMfazwe Yehlabathi yesiBili yadlala indima ebalulekileyo kule nto.
Imfazwe yehlabathi yesithathu ke, ngokweeleta kaPike, iya kuvela kwingxabano phakathi kwamaZiyoni ezopolitiko kunye neenkokheli zehlabathi lamaSilamsi. Ukuba sijonga iziprofetho zenkolo, sibona iJerusalem ikwindawo ekhokelayo. Ukwakhiwa kwetempile kaSolomon okucwangcisiweyo kuyakudlala indima ebalulekileyo kule nto ngokweziprofetho zexesha lokugqibela ezivela kwiinkolo ezichaziweyo. Ukwakhiwa ngokutsha kwale tempile kukhankanyiwe kwezo ziprofetho njengomqondiso wokufika kuka-anti, nto leyo ingumqondiso wokuba kuzakubakho imfazwe enkulu yehlabathi, eyamkela yonke into. Okumangalisayo kukuba, Unobhala welizwe laseMelika uMike Pompeo utyelele ikhathalogu phantsi kwe-mosque ngoku eyakhelwe kumabhodlo ale tempile (iZionists zezopolitiko?) Kungekudala. Ngokwenjenje wajonga imodeli yale tempile (yabona apha). Bobabini incwadi evela kuAlbert Pike, kunye neziprofeto zexesha lokugqibela, kunye nemiqondiso ebonisa ukuba kuya kwenzeka ntoni kwezi zibhalo, bonisa ukuba sibona ubungqina obukhulu. Iskripthi esaziwa yienkokeli zentlalo efihlakeleyo njenge-33e mason degree.
Singatsho ke ukuba ii-pharaoh bloodlines ziyazi ngesicatshulwa kwaye zikhokele uphuhliso loluntu ngokuhambelana nalo mbhalo. Ubungakanani obalulekileyo abawugcinayo ngu 'Ordo ab Chao'. Yiyo loo nto sinokuthi ngokuqinisekileyo sinokuqiniseka ukuba bahlala beqala ukudala isiphithiphithi ukuze bafumane amandla amaninzi. Yiyo loo nto ke ndiqikelela ukuba iBrexit iyangqinelana nale script kwaye le yiharbinger ye amandla amaninzi kummandla wamandla wamaSilam ukusuka kwileta engenhla evela ePike. Ngaphakathi eli nqaku Sele ndiyicacisile indlela ebendiqikelela ngayo iminyaka ukuba uBukumkani base-Ottoman buzakuchacha nendlela iBrexit eya kusetyenziswa ngayo ukubangela isiphithiphithi eYurophu. Ke u-Boris Johnson ngokuqinisekileyo akayona into engeyiyo inzala yegazi lika pharaoh. Ndithatha isikhundla sokuba bonke abantu esibona kubo kwezopolitiko nakumajelo osasazo banemvelaphi enjalo kwaye ukuba baya kuhlala besenza igalelo lokuzalisekiswa kwesikripti se-Master.
Uludwe lwekhonkco lovimba: wikipedia.org
Iimbambano zokugqibela zoBukumkani baseRoma baseNtshona Koloni zenza umzamo wokubuyisa eVenezuela
USheikh Imran Hosein uqikelela ukulwa kweConstantinople (Istanbul)
tags: imvelaphi, nzala, Boris, Brexit, eziziimbalasane, Johnson, Ottoman, Ottoman, sityebi, ETurkey, Turkish, AmaZionists
I-JtheRed wabhala wathi:
4 Septemba 2019 kwi-14: 03
Enkosi kuwo wonke umsebenzi wakho.
Andiqinisekanga ukuba ukhe weva nge-Sheikh Imran Hosein. Utshilo iminyaka iminyaka ukubaluleka kweConstantinople kumaxesha okugqibela kunye nendlela i-Orthodox yama-Orthodox kunye nelizwe lamaSilamsi eliya kuhlangana ngayo, kwaye ukuba xa uConstantinople ebuyiselwa lixesha apho i-Al-Masih ad-Dajjal ("mesiya wobuxoki, ixoki. , umkhohlisi ”) kwimfundiso yamaSilamsi iya kubuya. Nantsi ividiyo okanye yena athetha ngayo.
4 Septemba 2019 kwi-14: 05
Ukuba ukhangela kwi-Sheik Imran Hosein kwinqaku elingasentla uza kubona ukuba ndiyamkhuthaza kweli nqaku.
4 Septemba 2019 kwi-15: 13
Vumelana ngokupheleleyo nolu hlalutyo lubalaseleyo! Kwangelo xesha, le ndlu yezopolitiko nezoqoqosho yamakhadi sele isetyenzisiwe kumashumi eminyaka ukuba ifakwe ixesha elithile. Ngoku sibona yonke imiqondiso yenzeka, umzekelo ukufakwa kwesaphuli-mthetho esilahlwe njengentloko yeECB. Ngoku sifunda kwimithombo yeendaba ukuba umgaqo-nkqubo we-ECB wokuthenga awusebenzi kwaye wenze ukuba i-Euro ibe sengozini ngakumbi. Le yeyona njongo ye-ajenda yokufihla, ukuntywila yonke into ngaxeshanye ...
Nyibilika kakuhle wabhala wathi:
4 Septemba 2019 kwi-15: 17
NdingumKhristu ozelwe ngokutsha kwaye ndiyathanda ukuba undifundise zonke ezi zinto.Uphawu oluphantse lwandenza i-schizo ngenani labantu endikhe ndathetha nabo ndiyabazi ekubuyiseni kwabo bakhutheleyo eFreemasonry, neempawu zabo zokuziphatha kunye novalo I Tics zinokubethwa iziqwengana ukusuka kwi3 yeemitha kude kwaye zithandaze yonke imihla kwimiphefumlo yazo ukuba "zizicingele ngokwazo" ngaphambi kokuba zamkele ukutywinwa kweBhere!
Into ye-1 ayivakali ilungile kum, ukuba uhlala ubonakalisa ukuba inkqubo yeLuciferian ayilunganga, kutheni ke uyikopa ngokungathandekiyo? "Isicatshulwa" ukusukela siyinto engeyiyo kodwa "iplani ye-ajenda" kaSathana (ongazange azenzele yena kunye nezihlobo ze -course kodwa ubizwa nje ngokuba nguLusifa) ukuthintela uThixo kunye nendalo yakhe, kwaye ukuba sele ucaphula umntu onje ngePike Ukunyuka, kuthetha ukuba "uyaguquka" ngento eza kwenzeka, ngokwe-ajenda yasemhlabeni, kwaye vumela uSathana abe nguyena mntu unegunya emhlabeni
Ndiyakucebisa ukuba udlule kwixesha laseMesopotamiya "ngaphambi komkhukula", ukuba ujonga kwi-disinfo (sizizigidi zeminyaka, inyanga inyanga sisiqwenga selitye apho safika khona lol) ke ndiyazi ngokuqinisekileyo ukuba uza kufikelela kwiindawo eziphakamileyo, ndiqaphela ukuba kukho uMoya oyiNgcwele ophakathi kwakho Martin, Kwaye ndiyathemba ukuba inkcazo yam iyakwenza ukuba ujongeke ngendlela eyahlukileyo kuleyo inkulungwane ye21e (intiyo, egculelweyo neyoyikisayo) umChristian akujonga ngayo, ndingu hayi i-Katolika, iguqulwe ngokutsha njlnjl.
4 Septemba 2019 kwi-16: 05
Ngokusekwe kwinkolelo yakho yobuKhrestu, ndiyayiqonda impendulo yakho, kodwa ndingakucela (nabo bonke abantu abafunde oku) ukuba ulifunde eli nqaku ngononophelo, ukuze uqonde ngcono ukuba ungawabeka kanjani amagama athi 'Sathana' kunye 'noLusifa':
4 Septemba 2019 kwi-16: 08
Ngaphambi kokuba uphendule ngokubhekele phaya ndingathanda ukukubuza ngokunzulu kwaye uwafunde ngokucokisekileyo onke amanqaku phantsi konxibelelwano oluhlaza. Ngaphandle koko siya kuqhubeka nokujongana nokudideka kwentetho yaseBabylon.
4 Septemba 2019 kwi-19: 52
Molweni !!! Kwi-PC, isoftware 2x yaphosa into endifuna ukuyibhala!
Ngapha koko, ndibhale incwadi elungileyo ebingasokufuna ukuqala kwakhona ngentlonelo efanelekileyo. Ngendlela eyiyo kwaye akukho nto igxekayo okanye intetho enentiyo, bendiyenzile nam (mhlawumbi "baye" baphumeze okuthile, Demotivation?)
Ndiyaqonda apho uvela khona kuba uyawazi amasiko abo esoteric, Kodwa lwazi utshaba lwakho, kwaye ungabalingisi, Yonke into "bayithiyileyo", bayayicaphukisa, bayinika into eyahlukileyo kunaleyo yayicetywe nguThixo, into ke leyo ibuyela umva yinto eyinyani , Inani elikhulu lereferensi "Demiurge" mva nje okunene elithi ukuntlontwa libhekiswa kuThixo, Into engaphezulu kwe-Marvel's Endgame njl (i-Endgame ikwangumxholo omkhulu ngoku kuyo yonke into)
Uxolo ngento engaphezulu ayisekho ngoku, ndifumene umsebenzi wakho kulo nyaka ndisiva umfo oliNgesi esithi "Dome of the rock" was fire at the same time as Notre Dame (ngoku nangoku ke bekuzofuneka siyijongele "zemicimbi" ezayo) kwaye ayikho enye ngaphandle kwewebhu zeArabhu kwaye uze nge "Google" okanye zonke iindawo! Bold ukufunda kwakhona ukuba yayinguwe owahlaziya inenekazi "kuKhathalelo lolutsha" apho ndikholelwa ukuba iinkqubo ze-MKULTRA zibanjwa ngenxa yokuhlushwa ngengqondo, Banenombolo enkulu yeelogo zokomfuziselo ngaphakathi nakwizakhiwo zabo, Ngoku zininzi iimeko ngaphambili babengamaKatolika kwaye babeqhutywa ngabantu "becawa"
(Ndikwazi iminyaka !!!! 111)
4 Septemba 2019 kwi-16: 43
Kulabo abanamehlo okubona, yonke imeko ye-geopologic icacile njengeglasi.
Ngaba i-Fed ilungiselela ukwenza ngaphezulu kweDola yaseMelika?
Amagqabantshintshi angaqhelekanga nezenzo ezenziwe yintloko yeBhanki yaseNgilani kunye nezinye iingaphakathi zeebhanki ezingaphakathi zicebisa ukuba kukho imeko embi emisebenzini yokuphelisa indima yedola yaseMelika njengemali yolondolozo lwehlabathi. Kwinkqubo, oku kuya kubandakanya i-Fed ibangela ngabom ukudandatheka koqoqosho. Ukuba le meko isasazeke ngokwenene kwiinyanga ezizayo, uDonald Trump uya kuhla ezincwadini zeembali njenge-Hebert Hoover yesibini, kwaye uqoqosho lwehlabathi luya kugxothwa kukuwohloka okubi ukusuka kwi-1930s. Nazi izinto ekufuneka uziqwalasele.
I-Bank of England intetho
Intloko emalunga nokuthatha umhlala-phantsi kweyona Bhanki ikhethekileyo yaseNgilani, uMark Carney, unikezele intetho ebalaseleyo kwindibano yonyaka yabaphathi bamaphakathi kunye nabaphathi bezemali eJackson Hole Wyoming ngo-Agasti 23. Idilesi yephepha le23 kwabanye oobhanki abaphambili kunye nabangaphakathi kwezemali luphawu oluphambili apho amandla aBakho aqhuba ibhanki ephakathi yehlabathi acwangcisa ukuthatha umhlaba.
Kwangaxeshanye, ewe, ikhethini elikhulu lenziwa ngendlela yeBrexit, iimfazwe ezibizwa ngokuba zezorhwebo kunye nembambano eyandayo phakathi kuka-Israyeli ne-Iran.
Abo ngokuqinisekileyo baxanduva loku bamele amandla kwintsimi ebonakalayo kwaye, njengokuba kufanelekile abo bahamba ngeenyawo ezilungileyo, babone umsebenzi wangaphambili usenziwa ngokucocekileyo ukusuka kwintsimi engabonakaliyo. Umzekelo ezi lackeys zibini ze-BIS ...
9 Septemba 2019 kwi-15: 33
kuhle kwesalmon akufuneki ukuba imangalise ukuba i-drahi ishiye inqanawa yokufumana inzuzo engeyiyo ye-31 Okthobha (Brexit).
"UMario Draghi ushiya i-31 ngo-Okthobha njenge-CEO yeECB."
13 Septemba 2019 kwi-12: 23
Ke klaasje sele eqala ukuzigubungela, kukho ileta eyathunyelwa kwi-super mario..esiphi isenzo. Kodwa okuseleyo kuthathelwa ingqalelo kukuba badibana ngokufihlakeleyo inyanga nenyanga e-Basel ...
« Umcimbi weBrexit uhlala usisicwangciso esachazwa kwangaphambili
I-NOS kunye ne-RTL zinika ingqalelo epheleleyo kwizibanzi ezinzulu zokufihla imveliso yazo enzulu »
Utyelelo lulonke: 4.292.438
SandinG op ICoronavirus covid-19: esingayivayo ngoMaurice de Hond noWillem Engel, icandelo 2